Mayelana NATHI - Ningbo Zhaolong Optoelectronic Technology Co., Ltd.
I-Ningbo Zhaolong Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Umkhiqizi osebenzayo womhlaba wonke nomkhiqizi oholayo, ogxile kuzinto zikagesi ze-Smart home ezinokuhlangenwe nakho okungaphezulu kweminyaka eyi-10.
I-ZhaoLong iyinhlangano esebenzayo emhlabeni wonke futhi ingumkhiqizi oholayo, ogxile ekukhiqizeni nasekuthuthukiseni izibani zasebusuku, amalambu e-LED, izindatshana zasendlini, izipho nezinto zokusebenza zasendlini ezinokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20. Singumkhiqizi wegolide wemikhiqizo eminingi edumile emhlabeni, Yonke imikhiqizo ithola isitifiketi se-UL & CUL, CE, FCC. Sinohlelo oluphelele nolwesayensi lokuphathwa kwekhwalithi. Amandla ethu, ubuqotho, ikhwalithi kanye nensizakalo yethu ithole ukuqashelwa komhlaba.
Abasebenzi bethu bezohwebo abakhuluma isiNgisi abanolwazi olunzulu bazolalela izicelo zakho futhi bakusize ukhethe izinto ezifanelekile emakethe yakho ngokuya ngezidingo zakho. Futhi bazokusiza ngayo yonke imibhalo yokuthumela kanye namasiko.Masihambise imikhiqizo yakho emakethe ngokushesha ngensizakalo yethu yobungcweti. Uma unesithakazelo kunoma imiphi imikhiqizo yethu noma ungathanda ukuxoxa nge-oda lamakhasimende le-OEM / ODM, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Wamukelekile ukuvakashela imboni yethu ukuxhumana ngokubambisana okuqhubekayo. sibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bebhizinisi obuyimpumelelo namakhasimende emhlabeni jikelele.
I-ZhaoLong itholakala e-Yuyao, esifundazweni sase-Zhejiang, e-China, futhi ihlanganisa amamitha-skwele ayi-15,000. Sisebenza isikhungo samamitha-skwele ayi-18,000 esineziqu zokusebenzela zomjovo wepulasitiki, ukukhiqizwa kwe-PCB Surface Mounting negumbi lokuhlangana. Izinqubo ze-IQC eziya ku-QA ziqinisekiswe nge-ISO 9 0 0. Sineqembu le-R & D futhi sinikezela ngezinsizakalo ze-OEM & ODM. Senze amamodeli enziwe ngokwezifiso amakhasimende amaningi ngokuklama kokudala nomsebenzi omuhle. Kusizile amakhasimende ethu ukuwina imikhiqizo emakethe kakhulu.Izinto zethu ziyanelisa izinkulungwane zamakhasimende emhlabeni jikelele. Isipiliyoni sethu, ulwazi lwezobuchwepheshe kanye nezindawo zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme zisenza sikwazi ukunikela ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu ngamanani aphansi kakhulu emkhakheni wemikhiqizo yabathengi. Sigxila ekwakhiweni kwemikhiqizo emisha futhi sithuthukise inqubo yokukhiqiza. ukulawula ngokuqinile yonke inqubo, uqhubeke nokuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo futhi uzame konke okusemandleni akho ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Masisuse imikhiqizo yakho ukuyimaketha ngokushesha ngensizakalo yethu yobuchwepheshe. Xhumana nathi namuhla.
Leli yigumbi lethu lemboni
Lo ngumugqa wethu wokukhiqiza
Lena yi-workshop yethu ye-R & D
Leli igumbi lethu lesampula
Le yindawo yethu yokusebenzela
Lena indawo yokusebenzela yethu yokujova